I-Semalt iveza umehluko phakathi kwe-SEO ne-SMM
Amabhizinisi amaningi afisa ukuchuma ekuthengiseni inthanethi. Nokho, ukuze uphumeleleukumaketha kwe-intanethi, umuntu udinga izindlela ezithile zedijithali njenge-SEO ne-SMM. Lezi zindlela ezimbili zingase zizwakale zifana nomuntu osomabhizinisingubani ongakhulumi nomkhakha wokumaketha kwe-digital - lampade da soffitto quadrate. Isibonelo, i-SEO ingase ihlanganise amagama angukhiye asesha ngenkathi abezindaba bezenhlaloukumaketha kuhilela izikhangiso ezikhokhelwayo. Lezi zindlela ezimbili zingazuzisa amabhizinisi amaningi ase-inthanethi ikakhulukazi uma umuntu eyazi umehluko.
uJason Adler, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ImiSebenzi Yedijithali, iveza amaphuzu ayisihluthulelo angahlukanisa i-SEO esuka kuma-SMM:
Injini Yokucinga (SEO).
Lawa maqhinga ekuthuthukiseni iwebhu okuhlose ukwandisa ukubonakala kweiwebhusayithi yakho ezinjini zokusesha, ikakhulukazi uma ukhiye owodwa kumbuzo wosesho. I-SEO ihlanganisa izinto eziningi ezingosini nakwi-site ezingenayotraffic kusuka izinjini. Kumthengisi wedijithali. Umgomo wanoma yimiphi umkhankaso we-SEO ophumelelayo ukuthola indawo enhle kule simoyemiphumela yokusesha injini yeqoqo elinikeziwe lamagama angukhiye. Lokhu kubalulekile ngoba ungakwazi ukunqoba umncintiswano wakho, thola ithrafikhi entsha yekhwalithifuthi okubaluleke kakhulu, ukwandisa ukuguqulwa. I-SEO ihilela ukusebenzisa amasu afana nalokhu:
Ukucinga Engine Marketing (SEM) kuyindlela ehlukile yokumaketha kwe-intanethi.I-SEM yilona uhlu oluxhaswe. Kuhilela ukubeka izikhangiso ezihlosiwe kumakhasi omphumela wezinhlobo ezithile zomsebenzisi wokucinga..Inqubo ihilelaibhidi. Abanye abantu abathile babantu abathile bazobona isikhangiso sakho ngesikhathi esinikeziwe. Le ndlela isetshenziselwa kabanzi ngenxa yokungasebenzi kwayoukukhokha ngokuchofoza okuzenzakalelayo.
I-Social Media Marketing (SMM).
Nakuba i-SEO iqoqa ithrafikhi ngokusebenzisa izinjini, i-SMM ingenye enye idijithaliindlela yokumaketha. I-SMM isebenzisa ngokuqinile imidiya yomphakathi njengendlela yokuthola amakhasimende ase-intanethi. Imithombo yezenhlalo ihlose umphakathi oveleleizindawo zenethiwekhi njenge-Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest ne-LinkedIn. Abathengisi kule nsimu bathuthukisa ukwaziswa kwemikhiqizo, babutheleama-imeyli, athole izixhumanisi futhi athuthukise ama-margins enzuzo ngokusebenzisa izindlela eziningi ezitholakala kuma-social media. Ngokwesibonelo, i-Facebook ine-aisu lama-adverts akhokhelwayo. Lezi zikhangiso zizogxila kunani labantu abathile elihlelwe kahle. Okunye ukumaketha kwe-intanethiiziteshi emidlalweni yezenhlalo zifaka:
Amavidiyo afana ne-YouTube noma i-Vimeo
Ukukwabelana ngezithombe kufana no-Instagram no-Pinterest.
Ngokwesiko, kokubili i-SEO ne-SMM ihlose ukuthola amakhasimende kuwebhusayithi. Naphezu kwalokhoumehluko, futhi kwandisa ukuqashelwa kwezimpawu kubathengi abangaba khona. Ngakolunye uhlangothi, ukuguqulwa kwesithameli kuya ku-ikhasimende alixhomeke ngokuphelele kubo. Ezinye izinto ezifana ne-web design ziqala ukusebenza.
Izinkampani ezifisa ukuphumelela ku-intanethi zidinga ukumaketha kwe-digital, Nokho,imigomo efana ne-Search Engine Optimization (SEO) ne-Social Media Marketing (SMM) ingahle idideke. Bobabili i-SEO kanye ne-SMM yizokumaketha kwe-digitalamasu. Ngokuyinhloko, bahlose ukwandisa ukubonakala komkhiqizo futhi okubaluleke kakhulu, ukuthola amakhasimende amasha ku-intanethi. Nokho, lezi zibiliahluke endleleni asebenza ngayo. Isibonelo, i-SEO ihilela ukwandisa ukubonakala eminjini enkulu yokusesha kuyilapho i-SMM isho ukukhulaukuqaphela brand usebenzisa media social. Ngokuqonda ukuhlukana kwabo, kokubili amaqhinga ayadingeka futhi angaletha izinzuzo zesikhathi esideebhizinisini uma kwenziwa kahle.